Recive from Mail ! I hope everybody like it
by yee khin zaw on Tue Sep 01, 2009 4:59 pm
အင်မတန်မှ ထိရောက်တဲ့ စာသားတွေ ပါတဲ့ Mail တစ်စောင်ပါ...
ပို့ပေးသော သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...
အခြားသော သူငယ်ချင်းများလဲ သိအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
by gabar on Sun Sep 20, 2009 11:06 am
တော်တော်ကိုတိုက်ဆိုင်လွန်းနေတယ်။အင်း....(မြစ်မဟုတ်) လူဆိုတာလဲခက်သား မှားနေမှန်းသိသိကြီးနဲ့
လုပ်နေကြရတဲ့ အလုပ်တွေကများတယ်လေ။ ဒါမေမယ့် ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။
by yinhtwelay on Mon Jan 25, 2010 2:28 pm
ဆရာက အဖြေတွေကိုကြည့်ပြီး "အင်း.. ကြည့်ရတာ မိန်းကလေးတွေ ရုပ်ပျက်သွားတာက ယောက်ျားလေးတွေ စီးပွါးပျက်သွားတာထက် ပိုသည်းမခံနိုင်ကြပါလား? ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုမှာ အသိလေးပါတယ်။ သူတို့ကို ချစ်သူတွေဖြစ်မယ်လို့ တပည့်တို့ထင်ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား!"
"အင်း.. ဒါပေမယ့် သူတို့ကချစ်သူတွေပါလို့ မေးခွန်းမှာ ရေးမထားဘူးလေ" ဆရာကဆက်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့အသံနဲ့ "ဒီမေးခွန်းထဲက လူနှစ်ယောက်ကို "မိဘ" နေရာမှာထားပြီး ဆရာတို့ စိတ်ကူးကြည့်ရအောင်.. မေးခွန်း(၁)ထဲက "သူ"ဟာသူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ မေးခွန်း(၂)ထဲက "သူမ"ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ပြန်ဖြေခိုင်းရင် ဖြေခဲ့တဲ့ အဖြေအတိုင်း တပည့်တို့ထားနိုင်မလား?"
မူရင်း-- google search or 兩道選擇題
အချစ် နှင့် အချစ်အကြား အကွာအဝေး
by yinhtwelay on Mon Jan 25, 2010 2:30 pm
အရက်သောက်မထားရင် အဖေက စကားနည်းပြီး ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်သူဖြစ်တယ်။ သူ(၁ဝ)နှစ်အရွယ်မှာ အဖေကို သူစမုန်းတတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနှစ်က အရက်တွေသောက်ပြီး အမူးလွန်နေတဲ့အဖေဟာ အမေကို ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်။ အမေအရိုက်ခံရတာကို သူနဲ့မောင်လေး ထောင့်တစ်နေရာမှာရပ်ပြီး ကြည့်နေခဲ့တယ်။ နုနယ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ထူထည်းတဲ့အနာတရတွေက မုန်းတီးခြင်းအဖြစ် အရေပြားမွေးညင်းတွေအထိ ကူးစက်ရှင်သန်ခဲ့တယ်။
အဖေက ရွာသူကြီးပါ။ သာမန်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ အမြင်မှာ အဖေက အကြီးအကဲတစ်ဦးဆိုပေမယ့် စာဖတ်များတဲ့ သူ့အမြင်မှာတော့ အဖေက အဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖေထက် ရာထူးကြီးသူတွေ အများအပြားရှိကြောင်း သူသိထားလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရွာထဲက ကိစ္စသေးသေးမွှားမွှားလေးလုပ်ပြီး အာ.. ဒါက ဥပဒေအရ၊ ဒါက အထက်အမိန့်အရနဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတတ်တဲ့အဖေကို သူကြည့်မရခဲ့ဘူး။
"အဖေဟာ ဘာမှနားမလည်တဲ့ ရွာသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုမုန်းတယ်" လို့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာ သူရေးမှတ်ခဲ့တယ်။
အဖေက အရက်ကြိုက်သူဖြစ်တယ်။ ရွာထဲမှာ တစ်ခုခုလုပ်ရင် အဖေကိုအရင်ဖိတ်ကြတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ အဖေက တတပ်တအား ပါဝင်ကူညီတတ်တယ်။ အရက်သောက်ထားတဲ့အဖေဟာ ရွာသားတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ရှုံးသူအရက်သောက်စတမ်းဆိုတဲ့ ကစားနည်းတွေ ကစားနေတတ်တယ်။ ကစားနည်းတွေကို သူနားမလည်ပေမယ့် အဲဒီအပြုအမှုတွေကို ရွံမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ သူထင်ခဲ့တယ်။
အဖေက ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်တွေကို အိမ်မှာ ထမင်းဖိတ်ကျွေးတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ အမေက အိမ်ထဲအိမ်ပြင် အလုပ်များပြီး အဲဒီလူတွေကို ကျွေးမွေးဧည့်ခံရတယ်။ အဲဒီလူတွေကို သူကြည့်မရခဲ့ဘူး။ သူတို့တွေက သူစာကျက်၊ စာရေးလို့မရအောင် လာဖျက်ဆီးသူလို့ သူထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကြီးလာရင် အဖေ့လိုဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးလို့ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
အဖေကို မုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အဖေကို သူပြန်ပြောတတ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခွန်းမကျန် ခွန်းတုန့်ပြန်တတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအပြုအမှုတွေက အကျင့်တစ်ခုအဖြစ် သူသွေးကြောထဲမှာ စီးဆင်းနေခဲ့တယ်။ အဖေပြောတာတွေကို ဆင်ခြေရှာပြီး သူငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ အဖေက သူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီး "ငါ ရိုက်လိုက်ရ" လို့ အော်တဲ့အချိန် ခေါင်းမော့ပြီး အဖေကို သူပြန်အာခံကြည့်တတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေမျက်လုံးထဲက သူနားမလည်တဲ့၊ သူ့ကိုကြောက်ရွံစေတဲ့အရာတွေက သုံးလေးစက္ကန့်အတွင်းမှာ သူ့ခေါင်းကို ပြန်ခေါင်းငုံ့စေခဲ့တယ်။
အိမ်နီးချင်းတွေက အဖေ့ကို "ခင်ဗျားသမီးက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ထက်တယ်နော်" လို့ပြောရင် အဖေက "အသုံးကျမှာ မဟုတ်ဘူး... ပြန်အာခံဖို့ပဲတတ်တယ်" လို့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်။ ဒါကို သူကြားတော့ အဖေကို ပိုမုန်းခဲ့မိတယ်။
မြို့ပေါ်မှာ သူအထက်တန်းတက်ခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပတ်နေမှ သူအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်တယ်။
အဖေက ရွာထဲမှာ ရွာသူကြီးလုပ်နေဆဲမို့ အိမ်ပြန်တိုင်း အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အရက်ဝိုင်းသောက်နေတတ်တဲ့အဖေကို သူတွေ့ရတယ်။ ဒါကို ရွံရှာတဲ့သူက အိမ်ထဲမှာအောင်းနေရတာက အိမ်ပြင်မှာ အရက်သောက်ပြီးနီမြန်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပြုံးရယ်နေတဲ့ အဖေမျက်နှာကို မြင်ရတာထက် ကောင်းတယ်လို့ သူတွေးထင်ခဲ့တယ်။
အဖေအရက်သောက်လေ အမေကို သူသနားလေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမေက အမြဲတမ်း အဖေခိုင်းသမျှကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောရဲဘဲ မငြိုမငြင်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ သူကြီးလာရင် အမေလိုမဖြစ်စေရဘူး၊ အဖေလိုယောက်ျားမျိုးကို မရှာဘူး၊ အပြင်မှာ မကျေနပ်ခဲ့တာတွေကို အမေ့အပေါ်ဒေါသတွေ စုပုံတတ်တဲ့လူမျိုးကို မရှာဘူးလို့ သူ အဓိဋ္ဌာန်ချခဲ့တယ်။
ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်တိုင်း စာကျက်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူအိမ်မပြန်ခဲ့တော့ဘူး။ အသုံးစရိတ်ပြတ်မှ အိမ်တစ်ခေါက် သူပြန်တတ်ခဲ့တယ်။ အဖေနဲ့ သူစကားပြောနည်းခဲ့သလို အဖေကလည်း သူနဲ့စကားသိပ်မပြောခဲ့ဘူး။ အိမ်ပြန်တဲ့အချိန် အိမ်မှာအမေရှိမနေခဲ့ရင် ဆင်ခြေတစ်ခုခုရှာပြီး အိမ်ကနေ သူချက်ချင်းပြန်ထွက်ခဲ့တတ်တယ်။ အမေမရှိတဲ့အချိန် အဖေနဲ့အိမ်ထဲမှာ သူအတူရှိမနေချင်ခဲ့ဘူး။
တစ်ခါတလေ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အဖေမြို့တက်ခဲ့ရင် ကျောင်းမှာသူ့ကိုလာကြည့်တတ်တယ်။ ဧည့်ခန်းဆောင်မှာ နေ့ဝက်လောက်ထိ သူ့ကိုထိုင်စောင့်တတ်တဲ့ အဖေကို သူတွေ့ပေမယ့် ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်တာမျိုး သူ့မှာ မရှိခဲ့ဘူး။ စာသင်ခန်းထဲကနေ လေးလေးသွဲ့သွဲ့ထွက်လာပြီး "အော်.. အဖေ ရောက်နေတာလား" လို့ပဲ သူပြောတတ်ခဲ့တယ်။
အဖေကလည်း သူ့ကိုတွေ့ပေးမယ့် ရင်းနှီးဟန်မပြခဲ့ဘူး။ "အေး... နင့်အမေက လာကြည့်ခိုင်းလို့ လာခဲ့တယ်။ အဆင်ပြေရဲ့လား"လို့ ဝတ်ကျေတမ်းကျေပြောပြီး တံခါးစောင့်အဘိုးအိုနဲ့ ပြောလက်စ စကားကို ဆက်ပြောနေတတ်တယ်။
သမီးနဲ့အမေ စိတ်ချင်းဆက်ဆိုသလို အမေကို သူသတိရလိုက်မိတယ်။ အဖေသူ့ကိုလာတွေ့တာက အမေခိုင်းလိုက်လို့ပဲဖြစ်မယ်။ သူအိမ်ပြန်တိုင်း တံခါးဝမှာ သူပြန်အလာကို စောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့ အမေကို သူမြင်ယောင်မိတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့မျက်ထောင့်က စိုစွတ်လာတတ်တယ်။
"အေး.. စာကြိုးစား ငါပြန်တော့မယ်"
အဖေရဲ့စကားက ဒီလောက်ပဲလွယ်ကူလွန်းခဲ့ပါတယ်။ အဖေ့စိတ်ထဲမှာ ဒီသမီးအတွက် နေရာရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူထင်တယ်။ ကားပေါ်တက်ပြီး တံခါးစောင့်အဘိုးအိုကို လက်ပြပြီး အဖေအားရပါးရ နှုတ်ဆက်တယ်။ သူ့ကိုတော့ တစ်ချက်ပဲကြည့်ပြီး အဖေထွက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေ အဖေက အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ သူ့ကိုပေးတတ်တယ်။ အမေကို သူပိုကျေးဇူးတင်မိပြီး အဖေကိုတော့ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သူလို့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာ သူရေးမှတ်ခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာရွက် အမေကိုသူပြတော့ အမေက စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ စာရွက်ကို ပွတ်သပ်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ အဖေ့ကိုအမေပြတော့ အဖေမျက်နှာပေါ်က ပြောင်းလဲမှုတချို့ကို သူသတိထားမိလိုက်တယ်။ အဖေ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာတစ်ခု ရသွားပြီလို့ သူထင်လိုက်တယ်။ တုန်ယင်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းနဲ့ အဖေစကားတစ်ခွန်း ပြောလိုက်တယ်။
အဖေရဲ့စကားကို သူသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုစားပွဲလေးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
"ခင်ဗျားသမီး ထက်တယ်လို့ ကျုပ်ပြောခဲ့တာ မှန်တယ်မဟုတ်လား!" အိမ်နီးချင်းရဲ့ အပြောစကားကြားမှာ အဖေရဲ့ချီးမြှောက်သံကို သူကြားချင်နေခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေရယ်သံကိုပဲ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ သူကြားခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းတက်ဖို့ ကားဂိတ်အထိ သူ့ကိုအဖေလိုက်ပို့ခဲ့တယ်။ ကားထွက်ခါနီး အဖေက "ကားထွက်တော့မယ်။ စကားတွေ သိပ်မပြောတော့ဘူး။ ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ဖုန်းချက်ချင်းဆက်ခဲ့နော်.. နင့်အမေ သတိရနေလိမ့်မယ်" လို့ပဲပြောခဲ့တယ်။
နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်မတတ်သူကိုက်မိတယ်။ သမီးဆိုတာ အမေရဲ့အသားတစ်တုံးပဲလေ မလွမ်းဘဲနေပါ့မလား?
ကျောင်းပြီးတော့ မြို့က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ သူအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်ဝင်ပြီး ကျောင်းတုန်းကချစ်သူနဲ့ သူလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ သူလက်ထပ်တော့ အဖေက ရွာအိမ်အထိ သူ့ကိုလာတောင်းဖို့ ကောင်လေးကို ပြောခဲ့တယ်။ ကောင်လေးအိမ်က မချမ်းသာတဲ့အပြင် ကားလည်းမရှိတာကြောင့် မိုင်(၂ဝဝ)ကျော်ဝေးတဲ့ ရွာအထိ သူမသွားစေချင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကို အဖေကိုပြောပြတော့ အဖေကလက်မခံခဲ့ဘူး။ ရိုးရာအတိုင်း မိဘအိမ်အထိ သမီးရှင်ကိုလာတောင်းဖို့ပဲ ပြောခဲ့တယ်။
ချစ်သူကောင်လေးကို ဒီအကြောင်းပြောပြတော့ သူတို့က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ "အင်း.. ပိုက်ဆံနည်းနည်း ပိုကုန်သွားတာလေးပဲ ဒါကောင်းတယ်" လို့ လက်ခံခဲ့တယ်။
သူ့ကိုလာတောင်းတဲ့နေ့က အဖေအစောကြီးနှိုးနေခဲ့တယ်။ သတိုးသမီးကြိုတဲ့ကားပေါ် သူရောက်တော့ အဖေ့ကို သူမတွေ့ခဲ့တော့ဘူး။ အမေတစ်ယောက်ပဲ သူ့ကိုကားပေါ်ပို့ခဲ့တယ်။ ကားပေါ်ရောက်လို့ မောင်လေးကို "အဖေရော" လို့ သူမေးတော့ "အဖေလား မျက်ရည်တစမ်းစမ်းနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးထဲ ဝင်သွားလိုက်တာတွေ့တယ်" လို့ ပြောတယ်။ သူ့ရင်ထဲ စူးခနဲဖြစ်သွားမိတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာ အဖေမျက်ရည်ကျတာကို သူတို့တစ်ခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး။
မင်္ဂလာကားပေါ်ရောက်သွားတဲ့ သတိုးသမီးက ကားအောက်ပြန်မဆင်းရဘူးဆိုတဲ့ အယူထုံးစံကြောင့် အဖေကို သူမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ခြံပြင်ဘက် ဝေးဝေးတစ်နေရာရောက်မှ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်နေပြီး မျက်နှာကို လက်ဖဝါးနဲ့ပွတ်သပ်နေတဲ့ အဖေရဲ့ခပ်ပါးပါးအရိပ်ကို သူလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ကားတဖြေးဖြေးဝေးသွားတော့ အဖေ့အရိပ်ကလည်း မှုန်ဝါးဝါးအဖြစ်နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
အိမ်ထောင်ကျစရက်တွေမှာ သူပျော်ရွှင်နေခဲ့လို့ အိမ်ပြန်တဲ့ရက်တွေ ပိုနည်းသွားခဲ့တယ်။ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပေမယ့် အမေကပဲ ဖုန်းလာကိုင်တယ်။ တစ်ခါတလေ ဖုန်းတစ်ဘက်မှာ "သမီးရဲ့ဖုန်း သမီးနဲ့ပြောအုန်းမလား" ဆိုတဲ့ အဖေကို လှမ်းမေးတဲ့အသံ ကြားတတ်ရတယ်။
အဖေက ဖုန်းကောက်ကိုင်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တော့ တိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်။ ပြီးမှာ "အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေရဲ့လား? နေထိုင်လို့ ကောင်းရဲ့လား?" လို့မေးတတ်တယ်။ အဖေ့အမေးကို "ကောင်းတယ်"လို့ တစ်ခွန်းပဲ သူဖြေတတ်ခဲ့တယ်။ အဖေ့အသံတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား အိုစာသွားတာကို သူစိတ်မကောင်းစွာ သတိထားခဲ့မိတယ်။
"အဖေအိုပြီ။ ကျွန်မကြီးပြင်းခဲ့ပြီ။ အဖေကို အရင်က ကျွန်မမုန်းခဲ့ဖူးတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အဖေ့ခေါင်းပေါ်က ပိုဖြူလာတဲ့ဆံပင်တွေကို ကြည့်ရင်း ဘယ်ဆံပင်ဖြူကများ အနားမှာမရှိတဲ့ ဒီသမီးကို လွမ်းဆွတ်ပြီးဖြူတာလဲလို့ ကျွန်မတွေးခဲ့ဖူးတယ်" လို့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာ သူရေးမှတ်ခဲ့တယ်။
မောင်လေးလည်း တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ အိမ်ကလယ်တွေလည်း လျှော့နည်းကုန်တယ်။ ဆောင်းဦးမှာ အဖေက သူနဲ့မြေးကိုလာကြည့်မယ်လို့ ဖုန်းဆက်တယ်။ လင်ယောက်ျားခရီးထွက်နေတာကြောင့် အိမ်မှာသူတစ်ယောက်တည်း ရှိနေခဲ့တယ်။ မနက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ အဖေက နေ့လယ်ရောက်တဲ့အထိ ပေါ်မလာခဲ့သေးဘူး။ ကလေးကို ဘေးအိမ်မှာအပ်ခဲ့ပြီး အဖေ့ကို ကားဂိတ်မှာသူသွားရှာခဲ့တယ်။ ကားဂိတ်ရောက်တာနဲ့ လူတွေဝိုင်းအုံ့နေတဲ့ တစ်နေရာကို သူတွေ့မိတယ်။
"တောကတက်လာတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက် ကားပွတ်မိလို့တဲ့" လူတွေရဲ့စကားကြောင်း လူအုပ်ကြားထဲ သူအတင်းတိုးဝင်ကြည့်မိတယ်။ ကားသမားနဲ့ လျှော်ကြေးကိစ္စငြင်းခုန်နေတဲ့ အဘိုးအိုကိုတွေ့တော့ သူအော်ငိုပြီး ပြေးဝင်သွားမိတယ်။ ငိုနေတဲ့သူ့ကို ကြောင်ကြည့်နေတဲ့ အဘိုးအိုကိုတွေ့တော့ သူရယ်မိပြန်တယ်။
"ဒီမိန်းမ ဘာဖြစ်တာလဲ?" လူတွေရဲ့အမေးကို သူရှက်ရယ်ရယ်ရင်း လူအုပ်ကြားထဲက ပြန်တိုးထွက်လာတော့ တစ်နေရာမှာရပ်နေတဲ့ အဖေကို သူလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။
"အဖေ.. အဖေ ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်" ပါးပေါ်က မျက်ရည်တွေကိုသုတ်ရင်း သူမေးခဲ့တယ်။
သူမျက်ရည်ကျတာကိုတွေ့တော့ အဖေက အားနာဟန်နဲ့ လက်ထဲကလက်ဆောင်တွေကို ကိုင်မြှောက်ပြီး....
"တစ်မနက်လုံး ဈေးထဲပတ်နေတာ.. ဘာလက်ဆောင်ဝယ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဒါကို ငါ့မြေးလေး ကြိုက်မယ်ထင်တယ်" လို့မေးတယ်။ အဖေ့လက်ထဲက အထုပ်ကြီးငယ်တွေကိုကြည့်ပြီး သူရယ်မိတယ်။
"အဖေ.. လက်ဆောင်တွေ ဝယ်စရာမလိုဘူးလေ" သူ့ရင်ထဲ နာကျင်နေမိတယ်။ သူ့ရှေ့က ရှက်ရယ်ရယ်နေတဲ့ အဖေကို သူအားရပါးရဖက်ပြီး ငိုချင်ခဲ့မိတယ်။
လမ်းမဘက်ရောက်တော့ နေရောင်ထိုးနေတဲ့ အဖေ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီး ဘယ်အချိန်ကစပြီး အဖေ့ရဲ့ခါးတွေကုန်းခဲ့မှန်း သူမသိခဲ့ဘူး။ လမ်းပေါ်ကကားတွေ သတိထားစွာ အဖေရှောင်နေခဲ့ပေမယ့် မျက်စိက သူ့ဆီရောက်နေခဲ့တယ်။ ပါးစပ်ကလည်း "သတိထား... ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း .. လမ်းလျှောက်တာတောင် ကားတွေကို သတိမထားဘူး" လို့ သူ့ကို သတိပေးနေခဲ့တယ်။
"အဖေ... တောကလူတွေ ခွေးမကြောက်သလို မြို့ကလူတွေက ကားမကြောက်ဘူး" လို့ သူပြောတော့ မျက်ထောင့်စွန်းတွေ ကွေးညွှတ်တဲ့အထိ အဖေရယ်တယ်။ အဖေ့မျက်ထောင့်မှာ ကြိုးစသဏ္ဍာန် အရစ်အကြောင်းတွေက စွန်းထင်းလို့....
မြေးကိုတွေ့တော့ အဖေက ကလေးနဲ့တူသွားပြန်တယ်။ မြေးကို ရင်ခွင်ထက်မှာ ထွေးပွေ့ပြီး "ငါ့မြေးလေး.. ငါ့မြေးလေးကို အဘိုးအချစ်ဆုံးပဲ" လို့ဆိုတယ်။ အဖေ့မျက်လုံးအိမ်ထဲက မေတ္တာရည်တွေဟာ အပြင်ကို စီးကျလုလုဖြစ်နေခဲ့တယ်။
မြင်ကွင်းကြောင့် သူတစ်ချက်ငေးကြောင်သွားမိတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူ့ကိုလည်း ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီး အဖေပွေ့ဖက်တာကို မြင်ယောင်မိတယ်။ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေနဲ့ သူ့မျက်နှာကို အဖေပွတ်သပ်ကျီစယ်ခဲ့တာကို သူသတိရမိတော့ ရင်ထဲနာကျင်လာပြန်တယ်။ အိပ်မက်မကောင်းရင် သူ့ဆီဖုန်းမြန်မြန်ဆက်ဖို့ အမေကို အဖေပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အမေ့စကားကိုလည်း သူကြားယောင်လာမိတယ်။
"သမီးအဖေက သမီးကိုသတိရတိုင်း အမေကိုပဲ လွဲချတတ်တယ်" ဆိုတဲ့ အမေစကားကို ကြားယောင်ရင်း မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ် စီးကျမလာခင် အဖေ့အတွက် ထမင်းပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆင်ခြေနဲ့ မီးဖိုဘက် သူလှည့်ထွက်လာခဲ့ပြီး အားရပါးရ ငိုချခဲ့မိတယ်။
"အချစ်နဲ့အချစ်ကြား အကွာအဝေးကို အမြဲမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရုတ်တရက်မြင်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီအကွာအဝေးက ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ဖော်မပြောတတ်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုပဲဖြစ်မယ်" လို့ အဲဒီည နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာ သူချရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
မူရင်းရေးသားသူ---- Mo Chen Yuan (墨尘缘) -- 从爱到爱的距离
by yinhtwelay on Mon Jan 25, 2010 2:33 pm
by yinhtwelay on Mon Jan 25, 2010 2:35 pm
ရန်ပွဲလေး သဘောကျလို့ပို့ လိုက်တာ
ကောင်လေးကောင်မလေးများ မျက်စိအစာကျွေးနေသောဦးလေးကြီးများ တစ်ဖက်အခန်းတွင်
ဖရုသ၀ါစာ စကားလုံးများဖောဖောသီသီသုံးပြီး Game ဆော့နေကြသော
ဒီအချိန်ကအရမ်းပူတာလေ အန်တီက Aircon
ကြားရလားခဏလေးနော် ရော့အန်တီ ..ပြောလို့ရပါပြီ ”
ဦးလေးသားကိုတစ်ချက်လောက်ခေါ်ပေးစမ်းပါကွယ် ” “ဦးလေးသားကဘယ်သူလဲရှင်”
ဟာ.. မဟုတ်ဘူးလေ သမီးရဲ့ ဦးလေးသားက မလေးရှားမှာလေ
( ဆိုင်မှ ကောင်မလေးနှင့် အမျိုးသားကြီး……)
ဦးလေးရပြီနော် ပြောလို့ရပါပြီ ဟယ်လို ဟယ်လို သားလားကွ ငါပါ မင်းအဖေလေ
ေ….ာက်ရေးမပါတာ ဘာဂရုစိုက်ရမလဲကွ မင်းအဘငါ့အကြောင်းလဲသိတယ်မလား
အို … အသံကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးနဲ့အလိုက်မသိလိုက်တာဒီလူကြီးနှယ်
အဆင့် ကိုမရှိဘူးတကယ့် တစ်လုံးချိုင့်ပဲ
အမယ်လေး မလေးရှားသွား အလုပ်ကြမ်းလုပ်နေရတဲ့
ဘာမှကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူး အားလုံးက Internet ပေါ်တက်လိုက်ရင်
ခင်ဗျားသမီးက စလုံးမှာဟုတ်လား ဘာတုန်းဗျ စလုံးဆိုတာ ဘွဲ့ရဆိုတော့..သိပြီ
ရှင်နော်ရှင် ခက်ပါတယ်လေ ဘာမှနားမလည်တဲ့သူကိုပြောရတာ
ခင်ဗျားသမီးကမြန်မာမိန်းကလေးနော် မလုပ်ခိုင်းသင့်ဘူး ဒီလိုမျိုး
ရှင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ ကျွန်မသမီးက စာရင်းကိုင်လုပ်တာရှင့် အကောင့်တန့်
နဲ့သွားတဲ့လူရဲ့မိဘတွေဆိုအရောမ၀င်ပါဘူး Spass ဆိုတန်းတူပေါ့ PR ဆို
ဘယ်နှယ့်ဗျာကိုယ့်လည်းတတ်နိုင်သားနဲ့ သားသမီးကိုများ ဂုဏ်ပြိုင်ချင်လို့
ရှင် ရှင် လူပါးဝလှချည်လား ကျုပ်တို့ဘာသာဘာလုပ်လုပ် ဖြစ်နိုင်ရင်
ကျုပ်တို့ကလေ သားသမီးကို အဝေးတင်မကဘူး သိကြားမင်းနေတဲ့ တာဝတ
ဘာဗျ ကျုပ်တို့တွေ အဲဒီလိုလယ်ထွန်ပြီးစပါးစိုက်ထားလို့ခင်ဗျားတို့
အောင်မယ် လုပ်ရဲလုပ်ကြည့်စမ်းပါ ကျုပ်လက်ဝါးကလည်း ပါးမရွေးဘူးရှင့်
အေးလေ ဒါကြောင့် အမေရောသမီးရော မူယာမာယာများနေကြတာပေါ့
ခင်ဗျားမိဘတွေ နာမည်ပေးတာတကယ်တော်တယ်ဗျာ ဒီမှာ ဒေါ်မူယာမာယာကြီးကျုပ်ကလည်း
သံခဲတဲ့ တစ်ခဲတည်းရှိတာ နှစ်ခဲရှိလို့ကတော့ အရည်ကျို
မီးမြှိုက်ပစ်လိုက်မယ် တစ်ပွဲတစ်လမ်းစမ်းချင်လို့လား အဒေါ်ကြီး လာလေ
Re: Recive from Mail ! I hope everybody like it
by PHOENIX on Wed Jan 27, 2010 2:04 pm
မိန်းမကောင်းတွေ မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေပါ ....
(၂)ကိုယ်လက္ခဏာ ................................... ၁၆ ရပ်
(၄)လက်ဖ၀ါးလက္ခဏာ ............................... ၉ ရပ်
(၅)လည်ပင်းလက္ခဏာ ............................... ၁ ရပ်
(၆)အသံလက္ခဏာ .................................... ၃ ရပ်
(၇)မျက်နှာလက္ခဏာ ................................. ၈ ရပ်
(၈)သွားလက္ခဏာ .................................... ၁ ရပ်
(၉)မျက်စေ့လက္ခဏာ ................................ ၄ ရပ်
(၁၀)ဆံပင်လက္ခဏာ ................................. ၃ ရပ်
ကောင်းခြင်းလက္ခဏာ ၆၄ ရပ်တွင် ခြေ နှင့်လက်ဖ၀ါးလက္ခဏာ
ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရှာဖွေ တွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ (စာရေးသူ)
၈။ ကြီးမြတ်သော သားမြတ်
၉။ ဆင်ကဲ့သို့ သွားခြင်း
၁၀။ သိမ်မွေ့ သော ခါးရှိခြင်း
၁၁။ သိမ်မွေ့ သောအင်္ဂါရှိခြင်း
၁၃။ ဖွံ့ သောပေါင်ရှိခြင်း
၁၅။ လိပ်ကျောကုန်းကဲ့သို့ အင်္ဂါရှိခြင်း
၁၆။ ကြာပန်းကဲ့သို့ မွှေးသောကိုယ်နံ့ ရှိခြင်း
၁။ လည်ရေး ၃ ဆင့်ရှိခြင်း
၂။ အဆိုအမိန့် နှင့်သာယာသောအသံရှိခြင်း
၁။ လပြည့် ဝန်းနှင့် တူစွာရှိခြင်း
၅။ ပြည့် ဖြိုးသောပါးရှိခြင်း
၆။ မှဲ့ဝက်ခြံ ကင်းစင်သော နဖူး၌ ဖြောင့်မတ်သော တချောင်းတည်းသော
၇။ သံတ္တိမည်သောအရေးကဲ့ သို့နဖူးပြင်၌ အရေးရှိခြင်း
၁။ မကျဉ်းမကျယ် တင့်တယ်သော မျက်စေ့ ရှိခြင်း
၂။ ကြာညိုပန်းနှင့် တူသောမျက်စေ့ (အချို့ မှာ ပြာညိုသော မျက်စေ့ရှိခြင်း)
၃။ သမင်မျက်စေ့နှင့်တူသော မျက်စေ့ ရှိခြင်း
၄။ ပဒုမ္မာကြာကဲ့ သို့အချို့ မှာ စိမ်းသောမျက်စေ့ ရှိခြင်း
၁။ အဖျားကော့သော ဆံပင်ရှိခြင်း
၂။ ရှည်သော ဆံပင်ရှိခြင်း
၃။ သိမ်မွေ့ သော ဆံပင်ရှိခြင်း
by PHOENIX on Wed Jan 27, 2010 2:28 pm
From My FWD Mail